Restoring Family Links | Daraasadaha taariiqiga iyo raadinta Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaale ahaan: Ururada hiddaha iyo dhaqanka; iyo Kooxyada taariiqda deegaanka.
Daraasadaha taariiqiga iyo raadinta Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaa
Daraasadaha taariiqiga iyo raadinta Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaale ahaan: Ururada hiddaha iyo dhaqanka; iyo Kooxyada taariiqda deegaanka.
Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaale ahaan:
Ururada hiddaha iyo dhaqanka; iyo
Kooxyada taariiqda deegaanka.